Ankatoky ny fety: hipoka Analakely sy ny manodidina | NewsMada
Ankatoky ny fety: hipoka Analakely sy ny manodidina
20 andro sisa dia higadona ny fetin’ny Noely. Fety manan-danja ho an’ny Malagasy, indrindra ireo kristianina. Mirohotra miakatra eto Antananarivo avokoa ireo olona marobe avy any amin’ny faritra sy ny manodidina an’Antananarivo miantsena.
Fotoana fakana ireo entana ilain’ny mponina amin’ny andro fety, ny roa herinandro mialohan’ny fety toy izao. Manangona ny karazan’entana entina amidy any amin’ny faritra ireo mpivarotra sy mpandraharaha.
Tomefy olona ny tsenan’ny Sinoa eny Behoririka sy Analakely. Mifanaretsaka ny mpiantsena sy ny mpivarotra. Ankoatra ny lamaody toy ny akanjo sy ny kiraro, eo koa ireo mividy ny karazan-tsakafo hiatrehana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Fa anisan’ny lasa be mpanjifa koa ny kojakoja ho an’ny endrika amam-bika izay mivoatra be amin’izao fotoana ary mitobaka eny amin’ny tsenam-barotra.
Anisan’ny be mpividy koa ny fanaka sy ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia. Fotoana fanoloan’ny tokantrano ny fanaka ao an-trano izao faramparan’ny taona izao. Maro ireo ankoahonana mahavatra manolo ny fanaka sy ny kojakoja ao an-tokantrano hitsenana ny taona vaovao.
Mitohana araka izany ny fifamoivoizana ho an’Analakely sy ny manodidina. Mahafaka ora iray sy sasany vao tafavoaka ao. Misy ireo fiara fitateram-bahoaka misafidy ny tsy hiditra ao intsony fa mandany fotoana ny fitohanana.